ဆူဒန်နိုင်ငံ၌ လူထုဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း လူ ၅ ဦး သေဆုံး - Xinhua News Agency
ဆူဒန်နိုင်ငံ ခါတွန်မြို့၌ ဆူဒန်စစ်ဦးစီးချုပ် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအမံများအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများအား နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ခါတွန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဆူဒန်နိုင်ငံ မြို့တော် ခါတွန်မြို့နှင့် အခြားမြို့များတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က ဖြစ်ပွားသော လူထုဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ဆန္ဒပြသူ ၅ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးသွားကြောင်း ဖျက်သိမ်းခံ ဆူဒန်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ ခါတွန်မြို့၌ ဆန္ဒပြသူများက လမ်းပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ထားသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အစိုးရအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်း နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင် ဆူဒန်စစ်ဦးစီးချုပ်၏ မကြာသေးမီက လုပ်ရပ်များအပေါ် ကန့်ကွက်သည့် ကြီးမားသော ဆန္ဒပြပွဲများ မြို့တော် ခါတွန်မြို့နှင့် အခြားမြို့များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ခါတွန် ၊ ဘာဟရီ နှင့် အိုဒူမန်မြို့များတွင် စုရုံးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမြို့သုံးမြို့အား ဆက်သွယ်ထားသည့် တံတားများ ပိတ်ထားခြင်း နှင့် အဓိကလမ်းမကြီးများတွင် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာ ချထားခြင်းများကြောင့် ဆန္ဒပြသူများသည် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးချုပ်များ ၊ ရီပတ်ဘလီကန်နန်းတော် နှင့် စစ်တပ်ဌာနချုပ်ကဲ့သို့ အရေးပါသည့် အစိုးရအဖွဲ့ လုပ်ငန်းများ တည်ရှိသည့် မြို့တော် ခါတွန်မြို့ ရောက်ရှိရန် ချီတက်ရာတွင် မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးကို တောင်းဆိုကာ ဆူဒန်စစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan ၏ ဆောင်ရွက်သည့် အစီအမံများအား ငြင်းပယ်သည့် စာတမ်းများ ကိုင်ဆွဲခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ် Abdalla Hamdok အစိုးရ ထံ အာဏာပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကျည်ဆန်အစစ်များ အသုံးပြုခြင်း နှင့် မျက်ရည်ယိုဗုံးများကြောင့် အသက်ရှူကြပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ဖျက်သိမ်းခံ ဆူဒန်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆူဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒပြပွဲသည် ငြိမ်းချမ်းသည့်သဘောရှိသော်လည်း ထိုသူများ၏ ဆောင်ရွက်ပုံနည်းလမ်းမှာ အလျင်အမြန်ပင် လမ်းလွဲသွားခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဆန္ဒပြသူများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၉ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဟု ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဆူဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒပြသူများသည် ဌာနအများအပြားအား တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှု မလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အနည်းဆုံးအင်အားကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ် Al-Burhan က အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ကောင်စီနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အား ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ဆူဒန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
KHARTOUM, Nov. 13 (Xinhua) — At least five protesters were killed on Saturday during mass demonstrations in the Sudanese capital of Khartoum and other cities, the health ministry in the dissolved Sudanese government announced.
Once again, the protesters failed to reach central Khartoum, which includes vital government utilities such as the government headquarters, the Republican Palace and the Army Command, due to closure of the bridges linking the three cities and the intensive security presence on main roads.
The protesters raised banners rejecting the measures taken by the General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan, calling for civilian rule, and demanding the restoration of the government of Prime Minister Abdalla Hamdok.
“Five protesters were killed due to use of live ammunition and suffocation with tear gas,” the health ministry in the dissolved Sudanese government said inastatement.
The Sudanese police, for its part, said inastatement on Saturday that the demonstrations were ofapeaceful nature, but quickly “deviated from their course.”
It said that 39 policemen were seriously injured during the confrontations with the protesters.
The Sudanese police further said many of its departments were attacked by protesters, stressing that the police forces did not shoot gunfire while dealing with the protesters, and that they use the minimum force.
Photo 1 – People participate inaprotest against measures adopted by the Sudanese army commander in Khartoum, Sudan, Nov. 13, 2021.
The capital Khartoum and other cities on Saturday witnessed huge demonstrations in protests against measures recently adopted by the Sudanese army commander, including dissolving the government and appointinganew sovereign council. (Xinhua/Mohamed Khidir)
Photo 2- Photo taken on Nov. 1, 2021 shows road blocked with makeshift brick barricades by demonstrators in Khartoum, Sudan. On Oct. 25, the Sudanese Army took measures ending the partnership between the military and civilian coalition ruling during the transitional period in Sudan.
Since the announcement of foilingacoup attempt on Sept. 21, the disagreements between the military and civilian partners in Sudan’s transitional government have continued to escalate. (Photo by Mohamed Khidir/Xinhua)